सावधान ! यी बानीहरूले तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कमजोर पार्दछ -सावधान ! यी बानीहरूले तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कमजोर पार्दछ -
८ श्रावण २०७७, बिहीबार २०:२० मा प्रकाशित
काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित हुन प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई मजबुत पार्नु महत्त्वपूर्ण छ। यस समयमा, व्यक्ति प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनाउन धेरै प्रकारका चीजहरू खपत गर्दैछन्। खाना र पेय पदार्थ प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई मजबूत बनाउन विशेष ध्यान चाहिन्छ। हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि हाम्रो केहि बानीका कारण प्रतिरक्षा प्रणाली पनि कमजोर हुन थाल्छ।
जीवनशैलीलाई प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ पार्न केहि परिवर्तनहरू पनि आवश्यक पर्दछ। तपाईंको बानीले प्रतिरोध क्षमतालाई कसरी कमजोर बनाइरहेको छ भनेर थाहा पानुहोस
गलत तरिकाले पानी पिएर
धेरै मानिसहरुमा एक सासमा पानी पिउने गर्छन । तर यस प्रकारले पानी पिउनु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। यस तरिकाले पानीको सेवन गर्नाले फोक्सो र मिर्गौलामा प्रतिकूल असर पार्दछ। सधैँ बसेर मात्र पानी पिउनुहोस्।
तिर्खा, सुख्खा घाँटी, धेरै पिसाब र कमजोरीको भावना जस्ता समस्याहरू पानीको गलत तरिकाले सेवन गर्दा हुन सक्छ, जसको कारण प्रतिरोधात्मक शक्ति कमजोर हुन थाल्छ। यदि तपाईं स्वस्थ हुन चाहानुहुन्छ भने, तब बसेर सधैँ पानी पिउनुहोस्।
धेरै मानिसहरूलाई दैनिक मदिरा पिउने बानी हुन्छ। दैनिक रक्सीको सेवनले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। दैनिक मदिरा सेवन गर्दा प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ। यदि तपाईं प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन चाहानुहुन्छ भने रक्सी पिउने बानी छोड्नुहोस्।
उच्च कफी सेवन
धेरै मानिसहरू शरीर ताजा राख्न कफी खान्छन्। अत्यधिक मात्रामा कफी सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्दछ। कफीको अत्यधिक सेवनले निद्रा चक्रलाई कमजोर बनाउँछ। निद्रा वा कम निद्राको कारण प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुन थाल्छ। धेरै अनुसन्धानहरूका अनुसार रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई सुदृढ पार्न राम्रोसँग र गहिरो निद्रामा पार्नु महत्त्वपूर्ण छ।
मिठाईहरूको अधिक सेवन
अधिक मीठा चीजहरूको सेवन गर्दा प्रतिरक्षा प्रणाली पनि कमजोर हुन्छ। आजकल मानिसहरूले प्रतिरक्षा वृद्धि गर्न धेरै प्रकारका फलहरू खान्छन्। यी फलहरुबाट प्राकृतिक चिनी हाम्रो शरीर को लागी पर्याप्त छ। तसर्थ, मिठो कुरा त्याग्नुहोस्। धेरै व्यक्तिहरूलाई बढी मीठो खाने बानी हुन्छ विशेष गरी ती व्यक्तिहरूले मीठा खानु हुँदैन।
नुनको उच्च सेवन
नुन हाम्रो शरीरको लागि आवश्यक छ, तर नुनको अधिक मात्रा सेवन गरेर हाम्रो हड्डीहरू कमजोर हुन थाल्छ। यदि तपाई स्वस्थ हुन चाहानुहुन्छ भने अत्यधिक नुनको सेवन गर्नबाट बच्नुहोस्।
धेरै मानिसहरूलाई हरियो सागपात मनपर्दैन, तर स्वस्थ हुन हरियो तरकारीहरू आहार योजनामा ​​समावेश हुनुपर्दछ। भिटामिन, खनिज र अन्य पौष्टिक तत्वहरू हरी तरकारीहरूमा पाइन्छन् जसले रोग प्रतिरोध क्षमतालाई मद्दत गर्दछ। हरी तरकारीहरू सेवन गरेर पाचन प्रणाली पनि राम्रो छ।
शरीरलाई स्वस्थ राख्न फाइबर खानु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सिमी, सम्पूर्ण अन्नहरू, दलिया, फलफूल, बीउहरू फाइबरमा धनी छन्। फाइबर युक्त खाना खाउनुहोस् जस्ले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मजबूत बनाउदछ ।